Izindlela ze-5 i-Expo2020 izothuthukisa Umnotho wase-Dubai | Imisebenzi - Umsebenzi - Ukuhamba Umnotho
I-Dubai Fitness Challenge
Kusukela ngo-Okthoba 20, i-2020, kuze ku-Ephreli 10, i-2021, i-UAE izokwamukela umhlaba ukugubha amasiko, ukubambisana kanye nokushayela kwi-2020 World Expo Fair.
Yisikhathi sokuqala i-World Expo ezobanjelwa esifundeni sase-Arab, futhi indawo yaso yi-Expo 2020 indawo e-Dubai. Ngosuku lokufika, inani eliphelele lamazwe e-190 liqinisekisile ukubamba iqhaza embukisweni womcimbi wokubukisa ukuletha izigidi zabantu ku-UAE. Isihloko esikhethiwe ku-Expo 2020 sithi "Ukuxhuma Izingqondo, Ukudala Ikusasa", ngezingqikithi eziyi-Sustainability, Mobility and Ithuba.
Uhambo lwe-Expo 2020 laba yisikhulu ku-27th NgoNovemba 2013, lapho i-Dubai inqola amalungelo okubamba phakathi kwama-cheers, ama-jubilations nama-fireworks. Iholide likaZwelonke lamenyezelwe kuzo zonke izikhungo zemfundo ezweni lonke ngosuku olulandelayo. Lokhu kukukhombisa ukuthi kubaluleke kanjani isimemezelo futhi kamuva umcimbi akusho nje kuphela e-Dubai kodwa yonke indawo e-UAE naseMpumalanga Ephakathi. Ihlose ukushiya ifa elinenjongo elihlala njalo elizohlala ezizukulwaneni ngenkathi i-Expo isemthethweni.
Imithombo: I-Expo 2020 Youtube
Izizwe ezilandelayo zimemezele ukuhlanganyela kwabo ku-Expo 2020:
Imikhankaso yokuThengisa nokuThuthukisa iyaqhubeka futhi iqhutshwa ngokuphumelelayo ezindaweni ezihlukahlukene. Kube khona ukuvunyelwa okumbalwa kwe-Expo yi-superstars futhi izinkampani zomhlaba wonke nezinhlangano sezivele zibonise emaphakathini abo abonakalayo amasha kanye namanje.
Ngaphandle kwazo zonke izintandokazi kanye ne-pageantry i-Expo 2020 izobathinta kanjani umnotho, futhi izoletha kanjani inzuzo e-Dubai njengamanje?
Isiteshi esisemthethweni se-YouTube se-Dubai Expo 2020
Izindlela ze-5 I-Expo2020 izoqinisa umnotho we-Dubai - Vakashela isiteshi se-YouTube se-Expo 2020
Ikhono lezwe lokudala imisebenzi liwuphawu lokuthi imikhakha emnothweni wayo isebenza futhi isebenzayo. Uma amathuba okuqashwa adalwe, kukhona ukukhushulwa komthengi okwandisiwe ngakho-ke ukusetshenziswa kwezimali. Amabhizinisi akhula futhi akhulume ngokujwayelekile, abantu bangajabulela indlela yokuphila enhle emnothweni osimeme. Ngemuva kokuthi i-Dubai yamemezelwe ngokusemthethweni njengabaningi be-World Expo 2020, kulinganiselwa ukuthi ngaphezu kwe-277, imisebenzi ye-149 yayizokwakhiwa phakathi kwe-2013 kuze kube sekupheleni kwe-Expo ku-2021 ngokususelwa ekutadisheni.
Le misebenzi idalwe kuyo yonke imikhakha yomnotho kuhlanganise nezokuvakasha, ukudayisa, Ezezimali, Izakhiwo Ezivamile, Ukwakhiwa, zezindiza, Hospitality, Ubuchwepheshe, imidiya nokuxhumana, ezokuthutha, Security, Trade and Investment kanye nezinye eziningi. Esigabeni 'Umsebenzi' we-website esemthethweni ye-Expo2020 Dubai, kunezinketho zokuhambisa i-CV futhi usebenzise amathuba amaningana atholakalayo. Amathuba omsebenzi azotholakala ngaphambi kwesikhathi, ngesikhathi se-Expo ne-post-expo era.
Bona wonke ukuvula imisebenzi nge-Expo 2020
Kakade, izinkulungwane ziye zaqashwa ikakhulukazi ekwakhiweni, kwezobuchwepheshe nakwezokuthutha njengoba imisebenzi isalokhu kuqhutshwa endaweni ye-Expo2020 nakwezinye izindawo ezifanele ukulungiselela Okthoba 2020. Imisebenzi eminingana yangaphandle yakhiwe ngokubamba iqhaza kwamazwe ahlukene. Abafuna umsebenzi bangawasebenzisa ngokunenzuzo la mathuba ngokuba yingxenye yomlando wokwenza umlando.
Ukuthuthukisa eMkhakheni Wezokuvakasha
Ukuvakasha kuyisici esibalulekile ekukhuleni komnotho komnotho we-UAE. Ngokuvumelana ne Dubai's Umnyango Ezokuvakasha & Marketing Marketing, Dubai wabhalwa ukwanda kwamaphesenti amabili kokuvakashelwa kwezokuvakasha kuqhathaniswa nenkathi efanayo ngonyaka odlule. Njengasekupheleni kwekota yokuqala ye-2019, i-Dubai yamukele izivakashi zezwe ezingu-4.75 ezizweni jikelele.
I-Dubai ibonisa ngokucacile imephu ye-World Tourism ngezikhangisi ezifana ne-Burj Khalifa, i-Palm nehhotela lase-Burj Al Arab. Kakade, i-UAE isemthethweni ngamasayithi amane wamagugu e-UNESCO, kanye namanye amasayithi ayisishiyagalolunye angama-Cultural Heritage.
Ukusingathwa kwe Dubai kwe-World Expo 2020 ukuqhubeka nokuthuthukisa ukuqhutshwa kwezivakashi ezweni ngaphambi, ngesikhathi nangemva kwe-Expo. Kulinganiselwa ukuthi abantu abayizigidi ezingu-25 balindele ukuvakashela i-Expo 2020 e-Dubai phakathi kwe-20th Okthoba 2020 no-10th April 2021.
I-Dubai Corporation yezokuvakasha kanye nezohwebo zezohwebo (i-DCTCM) ihlala isebenza ngokubambisana nama-ejenti kahulumeni wokuthutha ukuze kube lula kubavakashi abaza e Dubai ukuze bathole i-visa kalula. I-Dubai yiyona ndawo enkulu yezindiza esifundeni futhi iphoyinti elilula lokuxhumanisa abahambi endleleni eya kunoma yikuphi ukuphela komhlaba.
Njengoba i-World Expo 2020, i-Dubai ibhekene nokukhangayo njengendawo yokuvakasha, futhi lokhu kuzoholela ekusheshiseni kwe-GDP ngokukhula kwezomnotho ezweni.
Amathuba okutshala izimali
Ukuzethemba kwezezimali kuyathuthukiswa lapho umnotho uphumelela futhi uqhubeka. Ngokusho kwedatha ezizimele ezivela ezinkampanini zezinsizakalo zezinkampani zamazwe angaphandle, i-EY, ukutshalwa kwezimali kwe-Expo 2020 Dubai esikhathini esizayo ezweni kuzothuthukisa umnotho wayo nge-AED 122.6 billion (USD 33.4 billion) nokusekela imisebenzi ye-905,200-iminyaka phakathi kwe-2013 ne-2031.
I-Dubai isethelwe ukubona ukwanda kwezimali zokutshalwa kwezimali emhlabeni jikelele ngenxa yamalungelo ayo okusingatha i-Expo2020. Izimali ziba zikhangayo ezweni lapho likwazi ukuthi liphephile, lamukele, lizuzisa. I-UAE yiyo yonke into futhi ngaphezulu futhi kalula ivela esifundeni seGulf naseMpumalanga Ephakathi. Izimali zivulekile ezindaweni zokuhweba, ezokuthengisa, ezokuthengisa nezokuthuthukiswa, ezezimali, ezokuzijabulisa, ezokuvakasha, ezakhiweni, ezokuvakasha, ezokungcebeleka kanye nezinye eziningi.
Kakade amabhizinisi amaningana aye athuthela noma avula amagatsha nezitolo e Dubai. Ukwakhiwa kuyaqhubeka kakhulu kulezi zinhlelo. Izinhlangano zomhlaba wonke kanye nezinhlangano zomhlaba zonke zizibandakanya i-Expo nabalingani bayo basebenzisana ngokuziqhenya ngokuzihlanganisa kwabo emakethe abo okuMaketha nokuBhankanya. Bobabili abatshalizimali basendaweni nabangaphandle bangaqiniseka ukuthi nge-World Expo 2020 eqhutshwa e-Dubai, umnotho we-UAE uzinzile, futhi ukutshalwa kwezimali kwabo kuphephile futhi kuqinisekisiwe ukubuyiselwa.
Ukwandisa nokuthuthukisa ebhizinisini lendawo
I-Dubai ihlala emabhizinisini amaningana, nabanikazi be-UAE Nationals, expats kanye nabathengi bangaphandle. Kunezinhlobo eziningi zendawo ezikhulile ekhaya ezizokwazi ukuzuza ngokusingathwa kwe-Dubai kwe-Expo 2020. Amabhizinisi asendaweni angumgogodla wokukhula komnotho wonke, futhi ohulumeni abaningi bafaka imali ekukhulisweni nasekukhuleni izinhlelo zokukhuthaza ukuhweba kanye nokukhula kwezinkampani zendawo. Ibhizinisi lasekhaya, kokubili amaqembu amakhulu kanye nama-SME kulindeleke ukuthi abone ukukhuthazwa okukhulu kokusetshenziswa nokutshalwa kwemali emikhakheni ehlukene e-Real Estate, Media, Travel and Tourism, Ezokungcebeleka, EzokuThengisa kanye nezimboni zomnotho jikelele.
Kunezindlela zamabhizinisi eziningana eziye zavela kuzo zonke lezi zinkampani ezitholakalayo ngisho nakwezimakethe ezintsha nezikhulayo. Izindlela eziningi zezinkontileka zendawo zingacubungulwa ngezinqubo zokuncintisana nezentengiso ezitholakalayo amathuba okuthenga. I-Expo2020 ine-marketplace esemthethweni yemakethe esemthethweni esemhlabeni jikelele lapho amathuba emabhizinisi atholakala ngokubhaliswa futhi okuzuzisa kakhulu kuma-SME. Lena yindlela ephumelelayo ibhizinisi lendawo elihlose ukudala imingcele emisha lingabonisa umhlaba ukuthi yini okufanele banikele.
I-Dubai Expo Guide ye-2020
I-Expo2020 ibone ukuthuthukiswa okukhulu kwengqalasizinda e-Dubai nase-UAE ngokubanzi. Ukuthutha okuholela esiteshini se-Expo njengemigwaqo, imigqa yesitimela namabhuloho kuye kwandiswa futhi kuthuthukiswa. Kukhona amaphrojekthi amaningi aqhubekayo ekwakhiweni kwamahhotela, izindawo zokuhlala, ukunakekelwa kwempilo, nezinye izindawo zokuhweba.
Ulwazi olutholakalayo lubonisa ukuthi izingxenye eziningi zendawo yendawo zingasetshenziswa kabusha, futhi lo mgomo wokusimama uzokwaziwa ngokuthi yi-District 2020 ngemuva kwe-Expo. Ukuhlinzekwa kwengqalasizinda kanye nezinsiza ze-Expo kuzoxhunyaniswa nesihloko salo Ukusimama, Ukuhamba Nethuba. Le ndawo iseduze ne-Al Maktoum International Airport, i-Dubai World Central (DWC) e-Jebel Ali futhi lokhu kuyokwenza kube lula ukuthutha izivakashi nabatshalizimali.
Ingqalasizinda izobe isetshenziswa ngaphambi, ngesikhathi nangemva kwe-Expo; futhi kuthuthukiswe amabhizinisi kanye nomnotho wonke.
Izindlela ze-5 I-Expo2020 izoqinisa umnotho we-Dubai,
Ulwazi lwetikiti seluvele lukhona ngokuhlukahluka kwe-1uku, izinsuku ezingu-3, izinyanga zenyanga nonyaka. Kuyoba khona izaphulelo zentsha nezomfundi; nokufinyelela okukhululekile kwabantu bokuzimisela, abadala 65 nangaphezulu, kanye nezingane kuze kube yi-5 iminyaka.
I-World Expo 2020 inikeze i-Dubabi ukuvezwa okulungile kanye nedumela elidinga ukufaka ukuzethemba komhlaba wonke kubathintekayo basekhaya nabangaphandle. Kubuye kwaphakamisa umqondo wokuziqhenya ngabahlali base-UAE kanye nezakhamuzi ezifanayo futhi uzoshiya ifa elidinga isikhathi eside ekukhuleni kwamasiko nezomnotho.
Xhumana no-Theresa R. Fianko ku-Linkedin